Xidiga Reer Brazil Ee Luiz Gustavo Oo Shaaciyay WAR Farxad Weyn U Ah Real Oo Ku Saabsan Neymar JR %
Xili ay sii xoogeysanayaa wararka xanta ah ee sheegaya in Neymar Jr, uu ka tagayo Paris Saint-Germain islamarkaana uu Real Madrid kusoo wajahan yahay ayaa waxaa sheekadaas biyo kulul ku shubay xidiga ay isku dalka yihiin ee Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo, ayaa wuxuu hadda ka tirsan yahay naadiga wadanka Faransiiska ka dhisan ee Marseille, ahna kooxdii uu ku dhawaacmay kulankii ay PSG, la dheeshay naadigaan wiilkeeda Neymar, ayaa wuxuu aaminsan yahay inuu bixi karo laacibkaan.
“Waxaan dhamaan-teen la soconaa in ciyaaryahan wax walba oo ku jira heer-kiisa oo u kale uu haysto fursad weyn oo uu ugu dhaqaaqi karo koox kale,” ayuu Gustavo usheegay wariyaasha, mar wax laga weydiiyay arrintaan iyada ah.
“Waxay noqan lahayd wax fiican inaan kusii arko Faransiiska si uu noqdo mid ku guuleystay horyaalka iyo mid aan wax badan uwada qabano dalkeena,” ayuu hadalkiisa ku daray ciyaaryahankii hore ee kooxda Bayern Munich.
“Marka waan arki doonaa waxa dhaca bilooyinka soo socdo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Luiz Gustavo oo kamid ah ciyaartoyda reer Brazil, waliba kuwooda ugu wanaagsan marka ay timaado Waaxda khadka dhexe ee garoonka.
Sikastaba, hadalka kasoo yeeray ciyaaryahankaan ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhawaan-lee ay ahayd kadib markii Madaxweynaha PSG, ee Al-Khelaifi uu usocodaalay wadanka Brazil, si uu ula soo kulmo Neymar, uuna xaaladiisa usoo qiimeeyo.
Sidoo kale, wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhawaan macalinka Real Madrid, ee Zidane uu ku nuux-nuux saday in hadii ay dhacdo inuu Neymar kusoo biiro Los Blancos, uu door fiican ka qaadan karo kooxda uuna wax badan sameyn karo.
Luiz GustavoNeymarPSGReal Madrid